04/19/12 ~ Latha Mobile 0945 000 1727
11:59 PM ko pae Lay No comments
11:56 PM (2 minutes ago)
to mrsorcerer, thuyazaw.zaw20., thuyazaw2012
နောက်ဆုံးလေ့လာမှုတွေအရ တချို့အစားအစာတွေဟာ ဆာလောင်မှုကို ပျောက်ကင်းစေပြီး ဇီဝရုပ်ဖြစ်ပျက်မှု မြန်ဆန်ကာ အဆီတွေမြန်မြန် လောင်ကျွမ်းစေနိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အောက်ပါအစားအစာတွေကို ကြည့်ပြီး သင့်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန် ၁၀ ပေါင်၊ ပေါင် ၂၀၊ ပေါင် ၃၀ ဒါမှမဟုတ် ဒီပေါင်ချိန်တွေထက် ပိုလျော့အောင် ပြုလုပ်ပါ။
လေ့လာမှုတစ်ခုအရ ဇွန်းတစ်ဝက်စာ ငရုတ်သီးမှုန့်ပါဝင်တဲ့ စွပ်ပြုတ်ရည်သောက်သူတွေဟာ အချိုစာ၊ အဆီစာနဲ့ အငန်စားချင်စိတ် လွန်ကဲမှု ထက်ဝက်ခန့် လျော့သွားတာကို အံ့သြဖွယ်ရာ တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လေးနာရီအတွင်း ၁၀ ကယ်လိုရီ ပိုမိုလောင်ကျွမ်းနိုင်တာမို့ တစ်နှစ်အတွင်း နှစ်ပေါင်လျော့ကျသွားနိုင်ပါတယ်။
ငရုတ်သီးမှာပါတဲ့ Capsaican တွေဟာ (ပူတဲ့ အရသာပေးတဲ့ ဒြပ်ပေါင်းပါ) ဦးနှောက်နဲ့ လည်ပင်းကို ပေးပို့တဲ့ အာရုံကြော (Trigeminal Nerve) ကို လှုံဆော်ပေးမှုကြောင့် ခံတွင်းလိုက်အား ပြောင်းလဲကာ ဇီဝရုပ်ဖြစ်ပျက်နှုန်း တိုးတက်လာတာကြောင့်လို့ သုတေသီတွေက ဆိုပါတယ်။
လေ့လာမှုပြုလုပ်ရာမှာ ပါဝင်သူတွေဟာ ရှလကာရည် နှစ်ဇွန်းမှ သုံးဇွန်း ပါဝင်ပြီး ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်များစွာ ပါဝင်တဲ့ အစာစားသူတွေရဲ့ အင်ဆူလင် မြင့်တက်လာနှုန်းဟာ ရှလကာရည်မပါဝင်ဘဲ သူတို့နဲ့ တူညီတဲ့ အစားအစာတွေ စားသုံးသူတွေထက် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း လျော့ကျတယ်လို့ တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အင်ဆူလင် အဆင့်နည်းတာဟာ စားချင်စိတ်နဲ့ ဆာလောင်မှုကို လျော့ကျစေတာကြောင့်ပါ။
၂။ ဗိုက်ပြည့်တာမြန်အောင် ချယ်ရီသီးစားပါ။
အစာစားပြီးလို့မှ မကြာခင်မှာ ဗိုက်ဆာသလို ဖြစ်နေသလား၊ အိပ်ရေးမဝတဲ့ အတွက် ခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှာ Leptin အဆင့်တွေ ကျဆင်းနေတာကြောင့်ပါ။ Leptin ဆိုတာဟာ သင့်ဗိုက်ပြည့်တင်းတာကို သိရှိနိုင်တဲ့ဟော်မုန်းပါ။ ချယ်ရီသီးဖျော်ရည် သောက်ပေးရင် ဆာလောင်တာ လျော့သွားနိုင်တယ်လို့ သုတေသီတွေက တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ချယ်ရီသီးမှာ မယ်လတိုနင်တွေ များစွာပါဝင်ပါတယ်။ မယ်လတိုနင်ဆိုတာဟာ သင်မြန်မြန်အိပ်ပျော်စေနိုင်တဲ့ ဟော်မုန်းပါ။ ဒါ့အပြင် ချယ်ရီသီးမှာ ရောင်ရမ်းမှု ပျောက်စေတဲ့ ဒြပ်ပေါင်းတွေ များစွာပါဝင်တာမို့ နာကျင်ညောင်းညာတဲ့ဝေဒနာတွေ ပျောက်ကင်းစေတာကြောင့် နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်ပျော်နိုင်ပါတယ်။
စိုးရိမ်စိတ်ပျောက်ကင်းအောင် Passion Flower (ပင်မှည့်သီးပွင့်) လက်ဖက်ရည်သောက်ပေးပါ။ အိပ်မပျော်သူတွေဟာ နေ့စဉ် ပင်မှည့်သီးဖျော်ရည်ကို တစ်ပတ်သောက်တာကြောင့် မြန်မြန်အိပ်ပျော်နိုင်ပြီး ညဘက်တစ်ရေးနိုးတဲ့ အကြိမ်လျော့သွားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲ့ဒီဖျော်ရည်ဟာ စိတ်ချမ်းသာစေတဲ့ ဟော်မုန်း(dopamine) အဆင့်ကို မြင့်တက်စေနိုင်လို့ပါ။
11:32 PM ko pae Lay No comments
ရေးသားသူ Kyaw သည် ဧပြီလ 19, 2012 တွင် 1:54pm အချိန်၌ရေးသားခဲ့သည်။
စာပေးမယ် ဘလော့ ပို့(စ်)ကြည့်မယ်
အင်္ဂလိပ်စာတိုးတက်ချင်လို့ ဘာသာပြန်ဆိုထားတာပါ။ လိုအပ်တာလေးတွေကို ၀ိုင်းဝန်း ဝေဖန် ထောက်ပြပေးစေလိုပါတယ်။ ဝေဖန်မှုကို လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါတယ်။
ဘ၀တွင် အကောင်းဆုံးအခါသမယအချို့(ဘ၀ရဲ့ဇိမ်အရှိဆုံး- အချိန်အခိုက်အတန့်ကလေးများ- တဒင်္ဂအချိန်လေးများ)
ခွင့်ကအပြန်မှာ စာတွေ (အီးမေးလ်တွေ) အများကြီးကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အခါ။
လှပသော နေရာအချို့ကို အားလပ်ရက်သွားလိုက်ရတဲ့အခါ။
ရေဒီယိုအစီအစဉ်မှ သင်နှစ်သက်သော တေးသီချင်းကိုနားထောင်လိုက်ရတဲ့အခါ။
အပြင်မှာမိုးရွာနေတာကို အိပ်ယာထဲကနေ နားထောင်ရတဲ့အခါ။
တွေ့ချင်နေပေမယ့် သိပ်တွေ့ဖို့မလွယ်တဲ့သူ ဆီကဖုန်းခေါ်တာကိုလက်ခံရရှိတဲ့အခါ။
မနှစ်လောက်ကတည်းကမသုံးရသေးတဲ့ ပိုက်ဆံတွေကို ဘောင်းဘီအိပ်ထဲကတွေ့လိုက်ရတဲ့အခါ။
အိပ်ယာကနိုးလာတဲ့အခိုက်မှာ နောက် နှစ်နာရီလောက်ပြန်ဆက်အိပ်လို့ရနိုင်သေးတယ်ဆိုတာကိုသိလိုက်ရတဲ့အခါ။
သင်သဘောကျခင်မင်တဲ့သူရဲ့ ရေမွှေးနံ့လေးသင်းနေသေးတဲ့ ဆွယ်တာလေးကိုအသုံးပြုရတဲ့အခါ(၀တ်ဆင်လိုက်ရတဲ့အခါ)။
ဘရုတ်ကျတဲ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ ဘရုတ်ကျခဲ့တာတွေ(ပေါက်ကရလုပ်ခဲ့တာတွေ) ကိုသတိရပြီးအားရပါးရ ရယ်နေမိတဲ့အချိန်မျိုးမှာ။
ကျွန်တော်တို့ အဲဒီတဒင်္ဂလေးတွေကို မြတ်နိုးတတ်အောင်လေ့လာသင်ယူကြပါစို့လားဗျာ။
8:30 PM ko pae Lay No comments
Yamin Aye asiamasters.yma@gmail.com
1:15 PM (7 hours ago)
to mayzaye, Aung, moekyaw, Aung, MayMonkyaw, bcc: mrsorcerer
၂၀၁၂ ဧပြီ ၁၉ ရက်နေ့ရ ပြည်ပအလုပ်အကိုင်သတင်း
ဒူဘိုင်းနိုင်ငံရှိ အဆင့်မြင့် Super Market
1. Bakery (မုန့်ဖုတ်) ၁၀ ဦး U$ 600
2. Cashier (အရောင်း/ငွေကိုင်) ၁၀ ဦး U$ 600
3. Merchandiser (အ၀ယ်တော်) ၁၀ ဦး U$ 600
4. Counterhand (ငွေကိုင်အကူ) ၁၀ ဦး U$ 600
အလုပ်ချိန် - ပုံမှန်
ယူနီဖောင်း - ပေးမည်
အသွား/အပြန် - ကြိုပို့ပေးမည်
အင်တာဗျူးရက် - ၂၀၁၂ ဧပြီလ ၂၅ ရက် မှ ၂၇ ရက်
ဒူဘိုင်းနိုင်ငံရှိ နိုင်ငံတကာလေဆိပ် Maintenance ဌာနတွင် လုပ်ကိုင်ရန်
1. Operator & Maintenance Engineer ၁၀ ဦး Dhr 9500 ~ 15000
2. BHIS Engineer ၁၀ ဦး Dhr 6500 ~ 8500
3. IT Engineer ၁၀ ဦး Dhr 7000 ~ 14000
4. Field Supervisor ၂၀ ဦီး Dhr 6000 ~ 8000
5. Field Lead Technician ၃၀ ဦး Dhr 5000 ~ 6500
6. Maintenance Supervisors ၁၀ ဦး Dhr 6000 ~ 8000
7. Maintenance Lead Technician ၁၀ ဦး Dhr 5000 ~ 6500
8. Mechanical Technicians – Field & Maint: ၂၅ ဦး Dhr 4200 ~ 4800
သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများအတွက် အတွေ့အကြုံရှိပြီးသူများ အထူးသင့်လျော်သည်။
အင်တာဗျူးရက် - ၂၀၁၂ ဧပြီလ နောက်ဆုံးပတ်
၀၉၇၃၀၅၀၆၀၃ သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
သျှမ်းမျိုးနွယ်စုများကို အတင်းအဓမ္မလူသစ်မစုရန် KIA ကို SSA အကြောင်းကြားမည်
7:31 PM ko pae Lay No comments
By ya wai
Postado Wednesday, April 18, 2012 at 8:59 PM
ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သောတိုက်ပွဲများကြောင့် KIA မှ အင်အားလျော့နည်းလာခဲ့တဲ့အတွက် ဒေသခံသျှမ်းလူမျိုးများမှာ KIA ရဲ့ လူသစ်စုဆောင်းခြင်းကို ခံနေရပါတယ်။ KIA ဆိုတာ ကချင်လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်လို့အမည်ရပြီးတော့ ကချင်ပြည်နယ်က ကချင်မျိုးနွယ်စုတွေနဲ့ ဖွဲ့ထားတာပါ။ ဒီလိုမျိုးဆိုင်ရာဆိုင်ရာ မျိုးနွယ်စုတွေနဲ့ဖွဲ့ထားတဲ့ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့ အမျိုးမျိုးဟာဒေသအလိုက်ရှိကြပါတယ်။
သျှမ်းမျိုးနွယ်စုတွေနဲ့ သျှမ်းပြည်အတွက်လည်း သျှမ်းပြည်တပ်မတော် ဆိုတာရှိပါတယ်။ ဒီအဖွဲ့ ဟာ အစိုးရနဲ့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲဖို့ အတွက်သဘောတူညီပြီးလို့လက် မှတ်ရေးထိုး ပြီးပါပြီ။ သျှမ်းပြည်နယ် အတွင်းမှာလည်း အပစ်အခတ် များမရှိတော့လို့ အေးဆေးစွာနဲ့ ရောင်းဝယ် ဖောက်ကား သွားလာနိုင်နေကြပါပြီ။ သျှမ်းပြည် တပ်မတော် မှာ ကချင်မျိုးနွယ်စုတွေမရှိပါဘူးလို့ ပြောနိုင် ပေမဲ့ ကချင်လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် KIA မှာတော့ သျှမ်းလူမျိုး KIA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရှိပါတယ်။ အစိုးရနဲ့ အပစ်အခတ် မစတင်မီ အချိန်များ ကပင် ကချင် ပြည်နယ်မှာ နေထိုင်တဲ့ သျှမ်းမျိုးနွယ်စုများအား KIA တပ်ဖွဲ့အတွင်းအမှုထမ်းရန် အတင်းအဓမ္မ ခြိမ်းခြောက် ၀င်ရောက်ခိုင်းပြီး စစ်သင်တန်း များတက်ခိုင်းနေပါတယ်။
ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးချိန်မှာ နယ်မြေတိုးချဲ့ဖို့နဲ့ တပ်အသစ်များဖွင့်နိုင်ဖို့အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး KIA မှ စစ် သင်တန်းများဖွင့်ကာ အင်အားဖြည့်တင်းမှုများပြုလုပ်နေခဲ့ပြီး KIA မုန်လိုင်ချက်သင်တန်းကျောင်းမှာ စစ်သင်တန်းဖွင့်လှစ်ရန်အတွက် ကျေးရွာများမှလူလတ်ပိုင်းအမျိုးသားများကို အဓိကထားစုဆောင်းနေ ခဲ့ပါတယ်။ မုန်လိုင်ချက်သင်တန်းအတွက် သျှမ်းလူမျိုးများ အများဆုံးနေထိုင်တဲ့ တာလောကြီး၊ ရွှေညောင်ပင်၊ အောင်မြေ(၁) ရွာများမှ ရွာသား ၈၀ ဦးစုဆောင်းခဲ့ပြီး KIA တပ်ရင်း(၃) ဆိုင်းအောင်မှာ သင်တန်းပေးဖို့အတွက် သျှမ်းလူမျိုး ရွာသား ၈၆ ဦးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။ လူသစ်စုဆောင်းဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့ ရွာသားအများစုဟာ သျှမ်းမျိုးနွယ်စုများ ဖြစ်ကြပြီး ကြောက်လန့်သည့်အတွက် ကြောင့်သာ စစ်သင်တန်းတက်နေကြရပါတယ်။
မုန်လိုင်ချက်နှင့် ဆိုင်းအောင်မှာဖွင့်ထားတဲ့ KIA စစ်သင်တန်းပြီးဆုံးပါက KIA မှ ကချင်ပြည်နယ်မှ သျှမ်းလူမျိုးများဖြင့် တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ်မှာ တပ်ရင်းတစ်ရင်းတိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်ရန် ဇန်န၀ါရီလ လဆန်းပိုင်းမှစတင်ပြီး မြေယာရှင်းလင်းခြင်းလုပ်ငန်းများကို စတင် လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
သျှမ်းလူမျိုးများအား KIA မှာ အမှုထမ်းခိုင်းတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး “ KIA ကိုအကြောင်းကြားဆက်သွယ် သွားမှာပါ သူတို့သဘောနဲ့စိတ်ပါလို့ သူတို့ဝင်တာကို ကျွန်တော်တို့ သျှမ်းပြည်တပ်မတော် SSA အနေနဲ့ ဘာမှ မပြောလိုပါဘူး။ ဒီလိုမျိုးစိတ်မပါတဲ့ သျှမ်းလူမျိုး မျိုးနွယ်စုတွေကို အတင်းအဓမ္မ လူသစ်မစုဆောင်းဖို့ မတရား မနှိပ်စက်ဖို့ အခုလိုဖမ်းဆီးပြီး စစ်သင်တန်းပေးထားတဲ့သူတွေကို ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားသွား မှာပါ “ ဟု RCSS/SSA မှ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဗိုလ်မှူး လောဝ်ဆိုင်မှ ပြောပြသွားပါတယ်။
RCSS/SSA အဖွဲ့နှင့် အစိုးရငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့တို့ဟာ ဇန်န၀ါရီလ ၁၆ ရက်နေ့က ပြည်ထောင်စုအဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးကာ သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့လို့ လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။
6:29 PM ko pae Lay No comments
April 17, 2012 ရက် ၊ 19:30 တွင် ကိုလွမ်းဝေ ရေးသားခဲ့သော ဘလော့ဖြစ်ပါသည် ။
စက်ပေါ်မှာဒေါင်းထားသမျှတွေအားလုံး zip နဲ့ ချုပ်ထားလို့ file တွေကို ဖွင့်မရတဲ့သူငယ်ချင်းတွေအတွက် Win RaR For 32&64 bit
6:26 PM ko pae Lay No comments
Posted by ခန့်ချောလေး on April 19, 2012 at 4:24pm in Download manager များ
Send Message ဆွေးနွေးထားသမျှအားလုံး
Win RaR For 32&64 bit
ကဲလာပီးဗျ..Win RaR ..ကွန်မှာ ဒေါင်းလော့တော့ဆွဲပီးသွားပီး ကွန်ပေါ်ရောက်တာနဲ့ zip file မပေါ်လို့လာလာအော်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက်နဲ့ကိုယ့်စက်မှာမထည့်ရသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက်ပါ Zip file နဲ့ တင်ထားသမျှတွေကို ဖွင့်ပေးတဲ့ Win RaR ကိုတင်ပေးလိုက်ပါပီး.....ဒီဆော့ဝဲလ်လေးက ...ကွန်ပျူတာတိုင်းမှာ မရှိမဖြစ် ထည့်ထားရမဲ့အရာလေးပါ လူ တိုင်းလိုလိုတော့ ရှိရင်ရှိမှာပါ ဒါပေမဲ့ .....မရှိသေးသော
သူငယ်ချင်းတွေအတွက်သာရည်ရွယ်ပါသည် အရင်ဆုံး ဆော့ဝဲလ်ကိုဒေါင်းလော့ချပါ ၊ ဒေါင်းလို့ပြီးရင် စက်ထဲသာတခါတည်း Run သာထည့်သာပေးလိုက်ပါ ပြောနေရင်လေကြောရှည်တယ်........ကဲ့ဒေါင်းသာသွားကြတော့ဟေ့ အဲ့မှာ....Win RaR 64-bit အတွက်ကိုဒီနေရာ"Win RaR 32-bit အတွက်ကိုဒီမှာပါ" အဆင်ပြေမယ်လို့တော့မျော်လင့်ပါတယ်......။
6:25 PM ko pae Lay No comments
Postado Wednesday, April 18, 2012 at 9:15 PM
ယနေ့နံနက်ပိုင်းက လှိုင်သာယာတွင် ရေကန်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရင်း သေနပ်ကျည်ဆံများတွေ့ရှိခဲ့သည်။
့ ရပ်ကွက်ပြည်သူများက ကန်တွင်းရှိအမှိုက်သရိုက်များကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရာတွင် ဆယ်အိမ်မှူးက ရေကန်ထဲဝယ် ကျည်ကပ် ၂၅ ကပ်နှင့် ကျည်တောင့်စုစုပေါင်း ၂၀၇ တောင့်ကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ထိုကျည်များအားး မြို့နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် လှိုင်သာယာရဲစခန်းမှ ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးတို့ လာရောက်ကြည့်ရှုကြပြီး၊ လှိုင်သာယာရဲစခန်းဝယ် သိမ်းဆည်းခဲ့သည်။
Popular Myanmar News Journalမှ ကူယူသည်။
6:15 PM ko pae Lay No comments
by Myanmar Mediamm
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်ရဲ့ မန္တလေးပါတီဝင်အသစ်တွေမှာ - တဖက်လူ သတင်းပေး များ ၀င် လာလို့စီစစ်နေပါတယ်လို့မန္တလေး NLD ကအင်တာဗြူးသတင်းတခုမှာ ဖတ်လိုက်ရတယ် ၊ နောက် သတင်း သမားအချင်းချင်း က ပဲ မခံမရပ်နိုင်လို့Facebook ကနေ အန်တီအိမ်ထဲ ကို သတင်းယူသွားခါနီးမှာ SB တွေဆီကနေ အသံဖမ်းစက်ယူ သွားပေးတာ..ပြန်အပ်ပေးတာတွေ မြင်တွေ့နေရလို့ စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ရတဲ့အပြင် သတင်းသမားတွေ နံမည်ပျက် မှာစိုးရိမ် မိပါတယ်လို့ရေးကြတာတွေ ဖတ်လိုက်မိပါတယ် ။
မြန်မာပြည်မှာ စစ်သားနဲ့ ဘုန်းကြီး အရေအတွက် လျှော့ဖို့လိုအပ်ပြီလား
6:14 PM ko pae Lay No comments
ဟုတ်ကဲ့ ဒီပို့စ်ကို မရေးခင် ဦးစွာပြောထားချင်တာကတော့ ကျွန်တော်ဟာ စစ်တပ်အသိုင်းအ၀ိုင်းကလူတစ်ယော
က်လဲ မဟုတ်သလို သံဃာအသိုင်းအ၀ိုင်းမှ လူတစ်ယောက်လဲ မဟုတ်ပါဘူး ဒီပို့စ်လေးကို ရေးရတဲ့ အကြောင်းကတော့ ကိုဘုန်းကျော်ရဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာ ဘုန်းကြီးအရေအတွက်နဲ့ စစ်သားအရေအတွက် လျှော့ချဖို့ လုပ်သင့်ပြီ ဆိုတဲ့ပို့စ်မှာ သူကြီးကိုယ်တိုင်က အဲဒီလိုဖြစ်အောင် ဆိုင်သူတွကို ပြောပေးပါဦးဆိုတဲ့ စကားကြောင့်ပါ ကျွန်တော်အခုရေးမှာကတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့အမြင် ၊ ကျွန်တော်ရဲ့ ယုံကြည်ချက် ၊ ကျွန်တော့်ရဲ့ အတွေးအခေါ်မျှသာဖြစ်တဲ့အတွက် မှားကောင်းမှားနိုင်ပါတယ် ဒီတစ်ကြိမ်နဲ့ဆို သူကြီးနဲ့ ကျွန်တော် စိတ်သဘောထား ၊ ယုံကြည်ချက်ချင်း မတူညီတာ နှစ်ခါရှိပြီထင်ပါတယ် ပထမတစ်ခါက ဆန်ရှင်တွေ မြန်မြန်ပြန်ဖွင့်ပေးအောင် ကြိုးစားကြစေလိုပါတယ် ဆိုတဲ့ပို့စ်မှာပါ အဲဒီပို့စ်မှာတုန်းကလဲ ဘာ့ကြောင့်ကြိုးစားကြစေလိုကြောင်းကို ကျွန်တော့်ရဲ့ သီးသန့်အမြင်နဲ့ အကြောင်းအချက်တွေ မြောက်မြားစွာဖြင့် ရေးသားခဲ့ပါတယ် အဲဒီလို ရေးသားခဲ့ရာမှာ သူကြီးရဲ့ အင်္ဂလိပ်စာလုံးတွေ အများကြီးနဲ့ သီဖွဲ့ထားတဲ့ ကန့်ကွက်ချက် တစ်ခုကို ရရှိခဲ့ပါတယ် ကိုကြောင်ကြီးရဲ့ ကြံ့ဖွံ့ရုံးရှေ့ကို ဆီပုလင်းလေး ခါးကြားချိတ်ပြီး သွားပြောကွာ လို့ ရေးသားမှုကိုလဲ ခံခဲ့ရပါသေးတယ် ဒါပေမယ့် အားလုံးဟာ တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးကို အမှန်တကယ် ချစ်မြတ်နိုးသူတွေဖြစ်ကြတဲ့အတွက် အများနဲ့မတူတဲ့ အမြင်တစ်ခုမှာ ဂရုဏာဒေါသောနဲ့ ပြောခဲ့တယ်လို့ပဲ ခံယူထားပါတယ်
ပထမဆုံးအနေနဲ့ စစ်သားအကြောင်း အရင်ဆုံးပြောပါမယ် အခုဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာ တပ်သားအဖြစ်နဲ့ စစ်ထဲဝင်သူတွေ အတော်ကို ရှားသွားပါပြီ ကျွန်တော့်ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာရော ၊ ကျွန်တော့်ရဲ့ သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်း ဆွေမျိုးအသိုင်းအ၀ိုင်းများရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာပါ မရှိတော့သလောက် ရှားသွားပါပြီ တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးမရရှိနိုင်မှုတွေကြောင့် မြန်မာ့တပ်မတော်အနေနဲ့ နှစ် ၂၀ ကြာ စစ်ပွဲတွေကို ဆင်နွှဲနေရတဲ့အတွက် တပ်မတော်ရဲ့ အင်အားဟာ အထွက်များပြီး အ၀င်နည်းနေလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ် အဲဒါကြောင့် ပြီးခဲ့တဲ့ စစ်အစိုးရလက်ထက်က စပြီး တပ်မတော်အင်အား ဖြည့်တင်းနိုင်စေဖို့အတွက် ၁၀ တန်းအောင် လူငယ်လေးများကို စစ်ဗိုလ်လောင်း ၊ စစ်အင်ဂျင်နီယာလောင်း ၊ စစ်ဆရာဝန်လောင်း စတဲ့ မက်လုံးမျိုးတွေ ပေးပြီး တပ်မတော်ထဲ ဆွဲသွင်းနေရပါတယ် တစ်နှစ် ၊ တစ်နှစ်ကို တစ်ထောင်ကျော်ကနေ သုံးထောင်ကျော် အတွင်းခန့် အင်အားဖြည့်တင်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ ထင်ပါတယ် နိုင်ငံတစ်ခု ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ မျက်နှာငယ်ရခြင်း မရှိပဲ ထိုက်သင့်တဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာတစ်ခုနဲ့ ရပ်တည်နိုင်စေဖို့ ခေတ်မှီပြီး အင်အားတောင့်တင်းတဲ့ မျိုးချစ်တပ်မတော်တစ်ခု ပိုင်ဆိုင်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ် လက်ရှိ လတ်တလောမှာတင်ပဲ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံနဲ့ ရေပိုင်နက် နယ်နိမိတ် အငြင်းပွားမှုပြဿနာ ၊ ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ နယ်စပ်ပြဿနာတွေမှာ မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ အရှုံးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်
ဒါဟာ ဘာကို ပြနေသလဲဆိုရင် တောင့်တင်းခိုင်မာတဲ့ တပ်မတော်တစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်ထားနိုင်ခြင်း မရှိတဲ့ သင်္ကေတကို ပြနေပါတယ် လက်ရှိ မြန်မာ့တပ်မတော်မှာ အင်အားဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတာ တရားဝင်စာရင်းဇယားတွေ မရှိလို့ မသိနိုင်ပေမယ့် အရေးကြုံလာရင် နိုင်ငံကို လုံလောက်စွာ ကာကွယ်နိုင်မယ့် အင်အားတစ်ခုအနေနဲ့တော့ ရှိမနေဘူးလို့ ထင်ပါတယ် အင်အားတောင့်တင်းတဲ့ တပ်မတော် မဟုတ်သေးဘူးဆိုရင် ခေတ်မီတပ်မတော်ကော ဖြစ်ပြီလားဆိုတာ ဆက်တွေးကြည့်ရအောင် ကျွန်တော့်အမြင်တော့ မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ ကမ္ဘာနဲ့တောင် မယှဉ်သေးနဲ့ဦး အရှေ့တောင်အာရှမှာတောင် ထိပ်တန်း စစ်လက်နက်တွေ ပိုင်ဆိုင်ထားမှုမှာ အဆင့် ၃ အတွင်းလောက်တောင် ၀င်ပါ့မလားဆိုတာ မသေချာပါဘူး ဒါဟာ ကျွန်တော့်ရဲ့ အမြင်ပါ စစ်တပ်နဲ့ နီးစပ်တဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းထဲက မဟုတ်တဲ့အတွက် သေသေချာချာတော့ မသိနိုင်ပါဘူး တကယ်တမ်းပြောရမယ်ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံလို အရွယ်ရောက်သူတိုင်း နှစ်နှစ်စစ်မှုထမ်းစေတဲ့ အလေ့အထ တစ်ခုကိုတောင် ထားရှိစေလိုပါတယ် အဲဒါမှ ပြည်သူနဲ့ တပ်မတော် မပြတ်တမ်းထိတွေ့မှုရှိနေပြီး ရင်းနှီးနွေးထွေးတဲ့ ဆက်ဆံရေးကို တည်ဆောက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ် ဒါဟာလဲ ကျွန်တော့်ရဲ့ ဆန္ဒမျှသာ ဖြစ်ပါတယ် ဒီအချက်ကို ကန့်ကွက်လိုသူတွေလဲ များစွာရှိကြပါလိမ့်မယ် လက်ရှိအချိန်မှာ တပ်မတော်မှ တပ်သားများဟာ အန္တရာယ်ရှိနိုင်သော နေရာဒေသများရှိ လမ်းဖောက်ခြင်းလုပ်ငန်းတွေ တံတားဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းတွေမှာ ၀င်ရောက်လုပ်ကိုင်ပေးနေကြရတာကို တွေ့နေရပါတယ် နောက်ပြီး လစာနှင့် ၇ိက္ခာ မလောက်ငှမှုကို ကာမိစေရန်အတွက် တပ်မတော်ဝန်းအတွင်း စုပေါင်းစိုက်ခင်းလေးများ စိုက်ပျိုးခြင်းလုပ်ငန်းတွေမှာ သင်ရောက်ဆောင်ရွက်နေကြရတဲ့ အတွက် တပ်မတော်သားများကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ကုန်ထုတ်လုပ်မှု ကျဆင်းတယ်ဆိုတာကို ကန့်ကွက်လိုပါတယ် နိုင်ငံတိုင်းမှာလဲ စစ်တပ်ဆိုတာ ရှိပါတယ် သူတို့တွေဟာ အရေးကြုံလာရင် နိုင်ငံအတွက် အသက်ပေးကြရမယ့်သူတွေ ဖြစ်ကြပါတယ် ဒါ့ကြောင့် တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးအတွက် တောင့်တင်းခိုင်မာတဲ့ တပ်မတော်တစ်ခု ရှိကို ရှိရပါမယ်လို့ ယူဆမိကြောင်းပါ
ဟုတ်ကဲ့ နောက်တစ်ချက်ဖြစ်တဲ့ ဘုန်းကြီးအရေအတွက်အကြောင်း ပြောကြည့်ကြရအောင် သံဃာများ စာပေကျမ်းဂန် သင်ကြားမှုအတွက် အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ သံဃာတွေဟာ မန်းလေးမြို့နဲ့ ရန်ကုန်မြို့ကို သွားရောက်ကြရပါတယ် အထူးသဖြင့်တော့ မန်းလေးမြို့ပေါ့ အဲဒါကြောင့် မန်းလေးမြို့နဲ့ ရန်ကုန်မြို့မှာ သံဃာတွေ များနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ် ဒေသအသီးသီးကနေလာကြတဲ့အတွက် သူတို့တွေဟာလဲ ပုထုဇဉ်များသာ ဖြစ်ကြသေးတဲ့တာကြောင့် စရိုက်စုံလင်လှတဲ့ သံဃာတော်တွေကို ထိုမြို့များမှာ တွေ့မြင်နေကြရခြင်း ဖြစ်ပါတယ် သက်တော် ၁၈ နှစ်နဲ့ ၂၃ ကြားခန့်ရှိကြသေးတဲ့ သ့ဃာတော်များဟာ ကိုယ့်ရဲ့ရပ်ရွာတွေကနေ ပရိယတ္တိစာပေများ သင်ကြားနိုင်စေဖို့ ရန်ကုန် ၊ မန်းလေး စတဲ့ မြို့များကို ရောက်ရှိလာကြခြင်းဟာ လူလိုဆိုရင်တော့ တက္ကသိုလ်တက်ကြတဲ့ ကျောင်းသားလေးတွေလိုပါပဲ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားအများစု ကျောင်းသားဘ၀ ပျော်ကြ ၊ ပါးကြသလိုမျိုး သူတို့တွေမှာလဲ အထိုက်အလျောက်တော့ စာသင်သားဘ၀မှာ ပျော်ပျော်နေတတ်သူတွေ ရှိကောင်းရှိကြပါတယ် အဲဒါက လူငယ်တို့ သဘာဝပါ နောက်တစ်ခုက ရန်ကုန်မြို့တော့ ကျွန်တော်မသိပေမယ့် မန်းလေးမှာ ရှိကြတဲ့ စာသင်သား သံဃာတော်များမှာတော့ အစားအသောက် ချို့တဲ့ကြပါတယ် ဖြစ်သလို စားသောက်ပြီး ချို့ချို့ငဲ့ငဲ့နဲ့ ပညာကို ကြိုးစားနေကြရတဲ့ သံဃာတော်တွေ အများကြီးပါ သူတို့တွေမှာ နေ့ကောင်းရက်မြတ်များမှာပဲ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ဘုဉ်းပေး သုံးဆောင်ကြရပေမယ့် အခြားနေ့များဆိုရင်တော့ အတော့်ကို ဆိုးဆိုးဝါးဝါးနေ့ရက်တွေကို ဖြတ်သန်းကြရတာတွေ ရှိပါတယ် သူတို့တွေရဲ့ ပညာသင်စရိတ် ကျမ်းဂန်စာအုပ်ဖိုးလေးတွေကို သူတို့ရဲ့ မယ်တော်တို့ ခမည်းတော်တို့ အခြားအခြားသော ဆွေမျိုး ဒါယကာ ဒါယိကာမများထံမှ အလှူခံကြရပါတယ် ခက်ခဲ ပင်ပန်းဆင်းရဲသလို ကျဉ်းကျပ်လှတဲ့ ၀ိနည်းတော်တွေကိုလဲ လုံအောင်ထိန်းသိမ်းကြရပါသေးတယ် ၀ိနည်းတွေ မလုံခဲ့လို့ ချိုးဖောက်ဖြစ်ခဲ့ရင်လဲ သူတို့တွေအနေနဲ့ အပြစ်ပိုကြီးကြရပါသေးတယ် အာပတ်ဖြေခြင်းဆိုတာ ရှိပေမယ့် တစ်ချို့အပြစ်တွေကတော့ အာပတ်ဖြေလို့ မရပါဘူး အတော့်ကို ကိုယ်ချင်းစာဖို့ကောင်းတဲ့ အနေအထားပါ
ကိုဘုန်းကျော်ရဲ့ပို့စ်မှာ ကိုမောင်မောင် မန့်ထားတာလေးကို ပြန်ဆွဲထုတ်ပြချင်ပါတယ်
ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော် ပြောပါမယ် ပရိယတ္တိ သာသနာ ၊ ပရိပတ္တိ သာသနာ ၊ ပရိဝေဒ သာသနာဆိုပြီး သာသနာသုံးရပ်ရှိပါတယ် ။ စာပေ ကျမ်းဂန်တွေကို သင်ကြား ခြင်း ၊ သင်ယူခြင်းကို ပရိယတ္တိ သာသနာပြုတယ်လို့ ခေါ်ပါတယ်။ မိမိကိုယ်တိုင် သံသရာရဲ့ အဆုံး တစ်ဖက်ကမ်းကို ရောက်ရှိအောင် ကျင့်ကြံကျိုးကုတ် အားထုတ်ခြင်းကို ပရိပတ္တိ သာသနာလို့ ခေါ်ပါတယ် ။ ဒါယကာ ဒါယိကာမများကို သံသရာ ၀ဋ်ဆင်းရဲမှ လွတ်မြောက်စေလိုတဲ့ တရားများကို ဟောပြောပို့ချပေးခြင်းကို ပရိဝေဒ သာသနာလို့ ခေါ်ပါတယ်။ သံဃာရယ်လို့ ဖြစ်လာပြီဆိုရင် သာသနာသုံးရပ်ထဲက တစ်ပါးပါးကိုတော့ အနည်းဆုံး ထမ်းဆောင်ရပါလိမ့်မယ် ပြောင်းပြန်အနေနဲ့ ပြန်ပြောရရင် သာသနာ သုံးရပ်ထဲက တစ်ခုခုကို ထမ်းဆောင်နေရင်ပဲ သံဃာရဲ့ တာဝန်ကျေပွန်ပါတယ် အဲဒါကြောင့် စာသင်တိုက်တွေထောင်ပြီး စာသင် စာကျက်နေတာဟာ သာသနာပြုနေတာပါပဲဗျာ ဘာစာမှ မသင်ကြရင် ဘာမှမသိတော့တဲ့အတွက် ဘယ်လိုလုပ်ပြီး တရားတွေ ဟောလို့ ပြောလို့ ရတော့မလဲဗျ တဖြည်းဖြည်း သာသနာကွယ်သွားတော့မှာပေါ့ ဟုတ်ကဲ့ နောက်တစ်ချက် ကမ္မဌါန်းရိပ်သာတွေ ဖွင့်ပြီး ဒါယကာ ဒါယကာမများကို သံသရာ တစ်ဖက်ကမ်း လွတ်မြောက်စေနိုင်တဲ့ တရားဘာဝနာတွေ ရှုမှတ်ပွားများခိုင်းတာဟာလဲ သာသနာပြုတာပါပဲဗျာ လက်ရှိဘ၀မှာ ချက်ချင်း လွတ်မြောက်ကြောင်းတရားကို မရနိုင်ကြသေးရင်တောင် သူတို့တွေအတွက် ပါရမီ အခံကို ရရှိစေပါတယ် နောက်တစ်ချက် စာသင်ကျောင်းတွေ ဆေးရုံတွေ ဖွင့်ပြီး လူမှုရေးအလုပ်တွေ လုပ်တာမျိုးကျတော့ သံဃာအလုပ်လုပ်တာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ မှန်ပေမယ့် အဲဒီလုပ်ငန်းတွေကရော မလုပ်သင့်ကြဘူးလားဗျာ သံဃာတော်တွေ အဲဒီအလုပ်တွေ လုပ်လို့ဆိုပြီး ရှုံ့ချသင့်ကြရဲ့လား လူထု ကောင်းကျိုး အများရဲ့ ကောင်းကျိုး လုပ်နေတာပဲ မဟုတ်ဘူးလား နောက်ပြီး ဟိုတယ်တွေ ၊ တည်းခိုခန်းခတွေ မတတ်နိုင်ကြတဲ့ မရှိဆင်းရဲသူတွေအနေနဲ့ ခရီးသွားလာရာမှာ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေကသာ မှီခိုအားထားရာ နေရာတွေမဟုတ်ဘူးလားဗျာ တည်းခိုရုံတင်မက အမှန်တကယ် စရိတ်ပြတ်ရင် စားသောက်မှုအတွက်ပါ ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ကြပါသေးတယ် နောက်တစ်ချက်က ကျွန်တော်သိတဲ့ ဦးဇင်းတစ်ပါးဆိုရင် သူ့ရဲ့ကျောင်းသင်္ခမ်းဟာ အဆောင်အယောင် ဘာမှမရှိပေမယ့် နှစ်စဉ် သူ့ရဲ့ ရွာက ကျောင်းသား ၊ ကျောင်းသူတွေ မြို့တက်ပြီး ပညာသင်ကြားခွင့်ရရှိနိုင်စေေ၇းမှာ သေချာတာကတော့ နေစရာ ရှိသွားပြီဗျာ ဆွမ်း ကွမ်းလေးတွေ ပိုတဲ့ နေ့တွေဆို စားစရာပါ မကုန်တော့ဘူးဗျာ ဒီကြားထဲ အလှူအတန်းလေးတွေ တရားပွဲလေးတွေနဲ့ ကြုံလို့ ၀တ္ထုငွေလေးရှိခဲ့ ရခဲ့ရင် ကိုယ်ကျိုးအတွက် မသုံးပဲ ကျောင်းစရိတ်သော်လည်းကောင်း ၊ မုန့်ဖိုးသော်လည်းကောင်း ပြန်စွန့်ပေးပါသေးတယ် အဲဒီနည်းနဲ့ နှစ်စဉ် နှစ်တိုင်း ကိုယ့်ရပ် ကိုယ့်ရွာ ကောင်းကျိုးအတွက် သယ်ပိုးဆောင်ရွက်နေပါတယ် အဲဒီလို ဘုန်းကြီးတွေလဲ မြန်မာပြည်အနှံ့ အများကြီး ရှိပါတယ်
အဲဒါဟာ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံရဲ့ လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ်တွေထဲမှာ သံဃာတော်များရဲ့ ပူးပေါင်းပါဝင်နေမှုပါပဲ လက်ရှိအချိန်မှာ သံဃာတော်တွေကို အင်တာနက်ဆိုင်တွေမှာတွေ့နေကြရပါတယ် သူတို့တွေ ချက်တင်းတွေ ထိုင်ကြပါတယ် ဟုတ်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့လဲ ထိုနည်းလည်းကောင်းပါပဲ ငယ်ရွယ်စဉ်အချိန် ကွန်ပျူတာလေးတစ်လုံးတောင် မရှိသေးချိန် အင်တာနက်ကို ဘယ်လိုစသုံးရမှန်း မသိသေးချိန်မှာ ချက်တင်းလေးတွေနဲ့ပဲ စခဲ့ရတာပါ အပျော်တမ်း အခြေအနေကနေ တဖြည်းဖြည်းချင်း မြှင့်ယူခဲ့ကြရတာပါ သံဃာတော်တွေကို အင်တာနက်ဆိုင်ပေးမ၀င်စေနဲ့ဆိုတဲ့ ဥပဒေမျိုးသာ ထုတ်ဖြစ်ခဲ့၇င် သူတို့တွေ အင်တာနက် သုံးတတ်ကြတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး နောက်ပိုင်းမှာ ခေတ်မှီစွာ သာသနာ ပြုနိုင်ဖို့ ၊ အင်တာနက်ကနေ တရား ဓမ္မပိုင်းဆိုင်ရာ မေးခွန်းတွေ ၊ အယူအဆတွေ ပြောဆိုဆွေးနွေးသွားကြဖို့ဆိုတာ ဖြစ်လာနိုင်တော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး တလောက ပို့စ်တစ်ခုမှာ ဖတ်လိုက်ရပါတယ် ကျွန်တော်တို့ ဘာသာကို ကမ္ဘာက သိအောင် စွမ်းဆောင်နေတာဟာ ယိုးဒယား ဘုန်းတော်ကြီးများနဲ့ တိဘက်ဘုန်းကြီး ဒလိုင်းလားမားကြောင့်လို့ ရေးထားတာကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ် စာရေးသူရေးသွားတာက မြန်မာ ဘုန်းကြီးတွေအနေနဲ့ နိုင်ငံတွင်းမှာပဲ အချင်းချင်း မညီညွတ်မှုတွေ ၊ အမြင်မတူမှုတွေကြားမှာပဲ အချိန်ကုန်နေကြရပြီး ကမ္ဘာအလယ်မှာတော့ ကျွန်တော်တို့သာသနာ အကြောင်းကို ဘာမှ ထုတ်မပြနိုင်ကြဘူးလို့ ရေးထားပါတယ် ကျွန်တ်ေတို့ မြန်မာနိုင်ငံက လယ်တီဆရာတော် ဘုရားကြီးအကြောင်းကိုလဲ ကမ္ဘာက သိခဲ့ကြပါတယ်လို့ ပြောလိုက်ပါရစေ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာဘုန်းကြီးတွေ ကမ္ဘာနဲ့ ယှဉ်ရင် ရင်ဘောင်မတန်းနီုင်ကြတာက Language ပိုင်း အားနည်းကြလို့ပါ Language ပိုင်းကောင်းကောင်းနိုင်တဲ့ သံဃာတော်တွေ ပေါ်ထွန်းလာတဲ့အခါ မြန်မာဘုန်းကြီးတွေလဲ ကမ္ဘာနဲ့ ယှဉ်ပြီး ရင်ဘောင်တန်းနိုင်လာကြပါလိမ့်မယ်လို့ ထင်မြင်မိပါကြောင်း
ထို ထိုသော အချက်တွေကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်သားနဲ့ ဘုန်းကြီးအရေအတွက် လျှော့ချသင့်ပြီဆိုတဲ့ အချက်ကို ကန့်ကွက်ပါကြောင်း
Avira Antivirus 2012 software free download
6:09 PM ko pae Lay No comments
Posted by ခန့်ချောလေး on April 19, 2012 at 8:50am in Virus နှင့် Antivirus များအကြောင်းဆွေးနွေးခြင်း
ဒီကောင်လေးကလည်း ကျနော်သုံးနေကျ Antivirus Software တွေထဲက နောက်တခုပါ..။ လူကြိုက်များတဲ့ နာမည်ကြီး ဆော့ဝဲလ်တွေထဲက တခုပါ..။ 2012 အတွက် ထုတ်ထားပေးတာပါ..။ Install ဆွဲပြီးတာနဲ့ Update အရင်လုပ်ပေးပါ..။ တခြား Antivirus Software ထက် သူ့မှာတခုပိုကောင်းတာက ဆော့ဝဲလ်တွေမှာပါလာတတ်တဲ့ Crack တို့ Path တို့ Keygen တို့ ကို ဖွင့်တော့မယ်ဆိုရင် ဒီထီးလေးကို ခဏပိတ်ထားပြီး ဖွင့်သုံးလို့ ရပါတယ်..။ တခြား Antivirus Software တွေမှာ ဒါမျိုးလေး မတွေ.ဖူးသေးပါဘူး..။ အောက်မှာတော့ သုံးနည်းလေးကို ပုံလေးတွေနဲ့ ပြထားပေးပါတယ်...။ ဖိုင်ဆိုဒ်တော့ နည်းနည်းများတယ်..။ 83 MB ရှိပါတယ်..။ လိုအပ်တဲ့သူများကတော့ အဆင်ပြေတဲ့ လင့်ကနေသာ ဒေါင်းယူ သွားလိုက်ပါ..
ဒီအောက်ပုံကတော့ ထီးလေးကိုခဏပိတ်ပြထားတာပါ..။ ပိတ်ထားချင်တဲ့အခါ ပိတ်တတ်အောင်လို့ပါ..။
အောက်ကပုံကတော့ Install ဆွဲပြီးပြီးချင်း ဖွင်တဲ့အခါ မြင်ရမှာပါ.. အနီဝိုင်းပြထားတဲ့ Start update ကို အရင်ကလစ်ပါ..
အောက်ကပုံလေးပေါ်လာရင် မီတာချောင်းလေး ပြည့်တဲ့အထိ ခဏစောင့်နေပေးပါ... ပြည့်သွားရင် သူ့ဖာသာ ပိတ်သွားပါလိမ့်မယ်..
အပေါ်ပုံလေးပျောက်သွားရင်တော့ အောက်ပုံမှာ အနီဝိုင်းထားတဲ့ Scan System ကိုကလစ်ပြီး ဗိုင်းရပ်စ်သတ်ပါ..။
အောက်ကပုံမျိုးပေါ်လာရင် Close ကိုနှိပ်ပါ..။
အပေါ်ပုံမှာ 100% ပြည့်သွားရင် End ဆိုတဲ့ စာသားလေးပေါ်လာရင် ကလစ်ပြီး ပိတ်လိုက်ပါ.. အောက်ပုံအတိုင်း မြင်ရရင် ဗိုင်းရပ်စ်သတ်တဲ့ အလုပ်ပြီးသွားပါပြီ..
ဒီလိုအောက်ပုံမျိုးပေါ်လာရင်တော့ ကြက်ခြေခတ်နှိပ်ပြီးသာ ပိတ်လိုက်ပါ..။
အားလုံးပဲ လုပ်တတ်ကိုင်တတ်ပြီး အဆင်ပြေကြပါစေ..
"မြန်မာ့လက်ရွေးစင် ဘော်လီဘော အားကစား သမား တစ်ဦး ၏ လက်စွမ်းပြ၇ိုက်နှက်ထိုး ကြိတ်ခြင်း "
6:06 PM ko pae Lay No comments
အား အောင်စစ်ပိုင် ရေးသားပါသည် ဧပြီ 18, 2012 at 9:30pm
ဖြစ်စဉ်မှာ သင်္ကြန်ဒုတိယအကြတ်နေ့( 15.4.2012 ) ညနေပိုင်း တွင် လှိုင်မြို့ နယ် ၊ သံလမ်း အားကစားရုံေ၇ှ့ ၇ှိေ၇ကစားမဏ္ဍပ်တွင် ( ကား များေ၇ပက်ခံနေစဉ် )ေ၇ပက်ခံလာသည့် ကား ချင်းေ၇ပက်ခံလိုသဖြင့် ကျော်တက်၇ာမှ အချင်း များ သည့်ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး ယင်း မဏ္ဍပ်မှ ကြီးကြပ်နေသည့် မြန်မာ လက်ေ၇ွးစင် ဘော်လီဘောကစား သမား " ရဲရင့်ထွန်း " အသက် ( ၂၄ )နှစ် ခန့် သည်ေ၇ပက်ခံ ကား နောက် ပိုင်း မှ ဖြန်ဖြေ၇န် ကား ထက်မှ ဆင်းလာသော ( အမှတ် (၁)၊ စက်မှုဝန်ကြီး ဌာန မှ အငြိမ်းစား ၀န်ထမ်း ) " ဦးဂွမ်ချိန် " အသက် ( ၆၂ ) နှစ်အား မပြောမဆို ဘဲ လက်သီး လက်ဝါးဖြင့်ဆယ်ချက်ခန့်ထို ဦးဂွမ်ချိန်၏ မျက်နှာနှင့် ၇င်ဘ တ် တို့ အား ထိုးကြိတ်၇ိက်နှက်ခဲ့သည်။ ထို ၇ိုက်နှက်မှုကြောင့် " ဦးဂွမ်ချိန် " မှာ လဲကျသွားပြီး မျက်နှာတွင် ဖူးေ၇ာင် ညိုမည်း ဒဏ်၇ာများ နှင့် ၇င်ဘတ်အောင့် ဒဏ်၇ာများ ၇၇ှိကာ ၇န်ကုန် ဆေး၇ုံကြီး ၏အေ၇းပေါ်ဌာန သို့ပို့ ကာ ဆေးကုသမှု ခံခဲ့ ၇ပါသည်။ ထု့ိနောက် ကာယကံ၇ှင်ဘက်မှ မကျေနပ်သဖြင့် မြန်မာ နီုင်ငံ ၇ဲတပ်ဖွဲ့၊ လှိုင်၇ဲစခန်း တွင် အမှုဖွင့်လှစ်ကာ အကြောင်း မဲ့ထိုး ကြိတ်ခဲ့သူ " ၇ဲ ၇င့် ထွန်း "အား တ၇ားဥပဒေ အ၇ အေ၇းယူပေးပါ၇န် တိုင်ကြား ထား ကြောင်း သတင်း ၇၇ှိပါသည် ။ " ဦးဂွမ်ချိန် " ၇၇ှိခဲ့ သော ထိခိုက် ဒဏ်၇ာများ မှာ - မျက်လုံး နှစ်ဖက်စလုံး ဖွင့် မ၇အောင်ဖူးေ၇ာင် နေခြင်း ၊ ဘယ်မျက်ခွံ တွင် ပွန်း ပဲ ဒဏ်၇ာ ၇ခြင်း ၊ ၀မ်းဗိုက် အနီး နံရိုး အောင့် နေခြင်း တို့ ဖြစ်ပါသည်။ ထို သတင်း အတိအကျကို သိ၇ှိလို ပါက အောက်ပါဖုန်း နံပါတ် များ အား ဆက်သွယ်စုံစမ်း နိုင်ပါသည် ။
Handphone.... 09-730 12952
Office Phone.. 09-730 94307
ထို သို့လူမဆန်သည့် ဖြစ်၇ပ်ကို မိတ်ဆွေများ အား သိစေလို့ ပါသည်။
www.sittpaing528.co.cc မှ ကူးယူတင်ပြပါသည်။
6:04 PM ko pae Lay 1 comment
★★Ye latt★★ ဧပြီလ 19, 2012 2:30pmတွင်★★Ye latt★★ မှတင်ပြခဲ့ပါသည်
မြန်မာ့သိုင်းဆိုသည်မှာ မြန်မာလူမျိုးတို့၏ ကိုယ်ပိုင်ရိုးရာ တိုက်ခိုက်၊ ခုခံနိုင်သည့် ပညာဖြစ်သည်။ သမိုင်းမှတ်တမ်းများအရ မြန်မာသိုင်းပညာသည် အေဒီ ၈ ရာစု နှစ် လောက်ကတည်းက
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပေါ်ထွန်းခဲ့သည်။ ရှေးမြန်မာမင်းများလက်ထက်တွင် မြန်မာ့သိုင်းပညာသည် အဓိကနေရာမှ နေရာယူပါဝင်ခဲ့သည်။ မြန်မာမင်းများ၏ မင်းခန်း မင်းနား၊ ပြာသိုလ မြင်ခင်းသဘင်၊ စစ်သည်တော်များကို သိုင်သင်ပေးခြင်း အစရှိသော နေရာများတွင် အဓိကအသုံးပြုခဲ့သည်။
1 စကားလုံးရင်းမြစ်နှင့် အနက်
5 ရာမည သိုင်း
သိုင်း၏အနက် အဓိပ္ပယ်မှာ "သ" ပြုပြင်ခြင်း ခြယ်သခြင်း၊ "သိ" သိမြင်ခြင်း နားလည်ခြင်း၊ "သို" သိမ်းဆည်းခြင်း သိုမှီးခြင်း သိုဝှက်ခြင်း၊ "သိုင်း" သိုင်းဝန်းခြင်း ခြုံလွှမ်းခြင်း ရစ်သိုင်းခြင်း ဟူ၍ဖြစ်သည်။ ရှေးမြန်မာဘုရင်များ လက်ထက် မင်းခန်း မင်းနား များတွင် သိုင်းတုတ်ကိုင် ကာ စောင့်ရှောက် ပေးရပြီး ရှေ့မှ စောင့်ရှောက် ပေးရသူကို
ရှေ့သိုင်းစောင့်မှ နောက်မှစောင့်ရှောက် ပေးရသူကို နောက်သိုင်းစောင့် ဟုခေါ်သည်။သိုင်းဆိုသည်မှာ ကျော်လွှားခြင်းဟုလည်း နားလည်ရပေမည်။
မြန်မာ့သိုင်း ဟုခေါ်သောဗန်တို၊ ဗန်ရှည် အတတ်ပညာသည် မြန်မာတို့၏ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ် ကိုယ်ခံပညာတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ ရှေးမြန်မာတို့က ကာယနှင့် စိတ်ဓါတ်ကြံခိုင်ရေးအတွက် အဓိကထားပြီး စစ်ပွဲများတွင် လက်နက်မဲ့၊ လက်နက်ကိုင်နှစ်မျိုးခွဲကာ အသုံးပြု တိုက်ပွဲဝင်သည့် ရိုးရာကိုယ်ခံပညာဖြစ်သည်။၄င်းဗန်တိုဗန်ရှည်
ပညာရပ်များကို အထူးလျှို့ဝှက် သင်ကြားပေးခဲ့ကြသည်။ သားစဉ်မြေးဆက်၊ ဆွေစဉ်မျိုးဆက် သွေးရင်းသားရင်းများသာ လူမသိအောင် တိတ်တဆိတ်သက်ကြားပေးလေ့ရှိသည်။ မြန်မာတို့၏ အမွေဖြစ်သော ဗန်တိုသိုင်းပညာသည် သရေခတ္တရာ သာသနာနှစ် (အစ) ဘီစီင်္ (၄၅၅) ကတည်းကတည်ရှိခိုင်ခံ့နေပြီး ဒီထက်စောသော မှတ်တမ်းများလည်းရှိခဲ့ကြသည်။ သရေခတ္တရာ၊ ဗိဿနိုး၊ ဟန်လင်း၊ ပုဂံ၊ ပင်းယ၊ အင်းဝ၊ ကုန်းဘောင်ခေတ် သမိုင်းတလျှောက် နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေး အတွက် အသုံးပြုခဲ့ရာမှ မြန်မာ့သိုင်း ဟူ၍ယနေ့ခေါ်ဝေါ်ထားကြပြီဖြစ်သည်။ လက်နက်မဲ့ ဗန်တိုနှင့် လက်နက်ကိုင် ဗန်ရှည် ဟူ၍ခေါ်တွင်ခဲ့သည်။ အမာဗန်တို၊ အပျော့ဗန်တိုနှစ်မျိုးခွဲကာ မြန်မာ့လက်ဝှေ့ကဲ့သို့ အကွဲအပြဲ မတွန့်မဆုတ်ရင်ဆိုင်သောနည်းကို ဗန်တို (အမာ) ဟုခေါ်ပြီး မိမိအားအထိမခံဘဲ ရှောင်တိမ်းကာတုန့်ပြန်သောနည်းကို ဗန်တို (အပျော့) ဟုခေါ်သည်။
ရှမ်းကြီးသိုင်းသည် အကွက်ကျဲသည်။ ခြေကွက်မှာလည်း ၄ ကွက်၊ ၆ ကွက်၊ ၈ ကွက်၊ ၁၂ ကွက် ဖြင့်ကစားသည်။
ရှမ်းလေးသိုင်း (ခူခါချန့်၊ ယနေ့အခေါ် သိုင်းပြောင်းပြန်) သည် အကွက်စိတ်သည်။ ခြေကွက်မှာလဲ ၄ကွက်၊ ၇ကွက်၊ ၉ ကွက်၊ ၁၂ ကွက် ရှိသည်။ သိုင်းပြောင်းပြန် ဟု ခေါ်သည်မှာ ရှမ်းကြီးသိုင်း၏ ခြေကွက်များနှင့်မတူ ပြောင်းပြန်သဘောရှိသောကြောင့် သိုင်းပြောင်းပြန်ဟုခေါ်သည်။
6:03 PM ko pae Lay No comments
5:22 PM (40 minutes ago)
လက်ရှိ အစိုးရသစ်ကို ကျောထောက်နောက်ခံ ပြုထားတဲ့ ကြံ့ဖွံ့ပါတီမှ ၀န်ကြီးများနှင့် အတွင်းရေးမှူးများကြောင့် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်တစ်ယောက် ခေါင်းကိုက်နေရကြောင်း အစိုးရရုံးနှင့် နီးစပ်သူများထံမှ သိရပါတယ်။ Clean Government ဟု ကြွေးကြော်နေသော်ငြားလည်း လက်ရှိ အစိုးရအဖွဲ့အတွင်း ကြံ့ဖွံ့ အစိုးရ၀န်ကြီးများ ဖြစ်ကြတဲ့ အမှတ် (၁) လျှပ်စစ် စွမ်းအား ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးဟောင်း ဇော်မင်းနဲ့ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်း မြင့်လှိုင်တို့ဟာ အဂတိလိုက်စားမှု၊ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ ပြုလုပ်နေကြကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
သူတို့နှစ်ယောက်ထက် ဆိုးတဲ့သူကတော့ ယခင်စက်မှု (၁) ၀န်ကြီးဟောင်း ယခု ကြံ့ဖွံ့ အတွင်းရေးမှူး တောင်သာ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်သောင်းဟာ အဂတိ လိုက်စားမှု ကမ်းကုန်အောင် လုပ်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဦးအောင်သောင်း ပွဲစားခ သန်းနဲ့ချီပြီး ကော်မရှင်ယူဆောက်ခဲ့တဲ့ စက်မှု ၁ စက်ရုံများအနက် တ၀က်လောက်က အရှုံးပေါ်နေလို့ ၀န်ကြီးဌာနနှစ်ခုပေါင်းလိုက်ရပေမဲ့ ဦးအောင်သောင်း လူလည်ကြီးကတော့ ချမ်းသာပြီးရင်း ချမ်းသာနေတယ်လို့ ပြောနေကြပါတယ်။ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်အား ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေက ၀န်ကြီးတွေကို ရွေးချယ်ဖို့ စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ခွင့် ပေးခဲ့ရာ ၀န်ကြီး ဦးအောင်သောင်းအား ဆက်လက် တာဝန် ပေးဖို့ မနှစ်သက်တဲ့ အတွက် ဖယ်ရှားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကြံ့ဖွံ့ပါတီမှာ သုံးဖွဲ့ကွဲလျက် ရှိနေကြောင်း သတင်းရရှိပါတယ်။ အဲဒီသုံးဖွဲ့ကတော့ ယခင်ဝန်ကြီးဟောင်း ထိုင်ခုံပျောက် လွှတ်တော်အမတ်တွေရယ်က တအုပ်စု၊ ယခင်တုန်းကလည်းဝန်ကြီး၊ ယခုလည်း ၀န်ကြီးလုပ်နေတဲ့ ကြံ့ဖွံ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေက တအုပ်စု၊ အစိုးရသစ်တက်လာမှ ကြံ့ဖွံ့ပါတီကိုရောက်လာတဲ့ ၀န်ကြီးများနှင့် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် (ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း)တွေက တအုပ်စုဆိုပြီး သုံးဖွဲ့ ရှိပါတယ်။ ဦးအောင်သောင်းကတော့ ၀န်ကြီးဟောင်း ထိုင်ခုံပျောက် လွှတ်တော်အမတ်တွေ အုပ်စု ဖြစ်ပါတယ်။
ဦးအောင်သောင်းတို့ အငြိမ်းစားဝန်ကြီးများက လွှတ်တော်ထဲမှာ နေရာလည်းမရ ဌာနလည်းမရှိ ဖြစ်နေတော့ ယခင်ကြံ့ခိုင်ရေးအသင်းထဲက သူတို့တပည့်တွေကို ပြန်အသုံးချပြီး ကျန်အုပ်စုနှစ်စုကို တိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီအတွင်းမှာ အုပ်စုလိုက်တိုက်ပွဲကြီးတွေ ပြင်းထန်နေကြောင်း သိရပါတယ်။ လက်ရှိကြံ့ဖွံ့အစိုးရအဖွဲ့ထဲက ၀န်ကြီးတွေကို တိုင်စာပစ်စာတွေပလူပျံနေတာဟာ ဦးအောင်သောင်းလို လက်သက်မွေးထားတဲ့ ကြံ့ဖွံ့ပါတီထဲက နေရာမရခဲ့တဲ့ အလုပ်အမှုဆောင်တွေက လုပ်တာကြောင့် ပြင်းထန်နေရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ပါတီထဲမှာ ဦးအောင်သောင်းကို လူလည်ကြီးလို့ခေါ်ကြကြောင်း သိရပါတယ်။ ခမီးခမက်တော်သူ ယခင် ဒုတိယ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မောင်အေးရဲ့ အရှိန်အ၀ါကြောင့် သမ္မတကြီးကလည်း ဦးအောင်သောင်းကို နေရာပြန်ပေးရန် လိုအပ်နေတာမို့ လွှတ်တော်အတွင်း ပဋိပက္ခများကြောင့် နေရာထားပေးရန် အခက်ကြုံတွေ့ နေရပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဦးအောင်သောင်းအား လွှတ်တော် အတွင်းမှာ ဆက်ထားမယ် ဆိုရင် ပြဿနာ ရှိလာနိုင်တာမို့ ငြိမ်းချမ်းရေး အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် အဖြစ် ပြင်ပတာဝန်ပေးပြီး ပထုတ်ဖို့ စီစဉ်ရပါတော့တယ်။ လူလည်ကြီးကတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် ရာထူးကိုရယူပြီး စစ်တပ်ကိုပါ လွှမ်းမိုးမှုယူနေလို့ စစ်တပ်ကလည်း သူ့ကို သဘောကျ နှစ်သက်ခြင်း မရှိကြောင်း သိရပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စမှာလည်း KIO နဲ့ဆွေးနွေးနေတာ အဆင်မပြေသေးသလိုဘဲ “၀” UWSA အဖွဲ့ကလည်းသူ့ကို မယုံကြည်ဘူးလို့ သိရပါတယ်။ ဦးအောင်သောင်း ခေါင်းဆောင်တဲ့ အဖွဲ့ဝင်တွေကို သမ္မတက စိတ်မချလို့ KIO နဲ့ ရွှေလီ ဆွေးနွေးပွဲမှာ ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်း အောင်ကြည်အား ထပ်မံ ထည့်ခိုင်းရပါသေးတယ်။
ငြိမ်းချမ်းရေး အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် နောက်တစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်း အောင်မင်းကို ယခင်က ဦးအောင်သောင်း လက်အောက်ထဲသို့ ထည့်သွင်းခဲ့ပေမဲ့ အစိုးရ အဖွဲ့အတွင်း တာဝန်ရှိသူများက ထိုသို့ တာဝန်ပေးရန် မသင့်တော်ကြောင်း၊ ဝေဖန်မှုကြောင့် ပြန်လည် ဆွဲထုတ်ခဲ့ရပါတယ်။ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ဟာ ကြံ့ဖွံ့ပါတီခေါင်းဆောင် ဦးရွှေမန်းနှင့် လည်းကောင်း၊ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဦးဌေးဦးနှင့် လည်းကောင်း၊ ကြံ့ဖွံ့ ပါတီထဲမှ ပါတီဝင်အချင်းချင်း တိုင်စာပစ်စာများ တက်ရောက်လာခဲ့တဲ့ ကိစ္စများ အပေါ် အကြေအလည် ဆွေးနွေးနေရပါတယ်။ နောက်ဆုံး ဦးရွှေမန်းက ကြံ့ဖွံ့ ပါတီဝင်များ အဂတိ လိုက်စားမှု သက်သေ ထင်ရှားတွေ့ခဲ့ရင် အရေးယူတော့မယ်လို့ ကြေညာလိုက်ရတဲ့အထိ ဖြစ်ခဲ့ရပါကြောင်း တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
ဦးသန်းရွှေက ဦးနေ၀င်းကို ဘာကြောင့် အညှိးကြီးခဲ့တာလဲ
သွားလေသူ စစ်အာဏာရှင် ဦးနေ၀င်းအား စစ်အာဏာရှင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးဟောင်း သန်းရွှေက အညှိးကြီးခဲ့ပုံအား ပြည်တွင်းရှိ အငြိမ်းစားယူသွားတဲ့ တပ်မတော် အရာရှိဟောင်း တစ်ဦးက စည်းလုံးခြင်းရဲ့အင်အား ၀က်ဘ်ဆိုဒ်သို့ သတင်း ပေးပို့လာပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးဟောင်း သန်းရွှေဟာ ယခင် စစ်အာဏာရှင်ဟောင်း ဦးနေ၀င်းရဲ့ ချီးမြှင့်မှုကြောင့် ထိပ်ပိုင်းသို့ တက်လာရသူ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဦးသန်းရွှေ တပ်မ (၈၈) တပ်မမှူး ဘ၀တုန်းက ရှေ့တန်း တပ်မဌာနချုပ် ရှိရာ ကျိုင်းတုံမြို့တွင် အခြေပြုခဲ့စဉ်က ဦးနေ၀င်း သွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက ဗကပ အင်အား ကြီးမားစွာနဲ့ တိုက်နေရတာကြောင့် တပ်မ (၈၈) တပ်များ အလူးအလဲ ခံနေရပါတယ်။ ချင်းသေနတ်ကိုင် တပ်ရင်း (၃) မိုင်းယောင်းမြို့မှာ ဗကပ ၀င်စီးခံရတဲ့တိုက်ပွဲများ အပါအ၀င် ကကကြည်းမှ တပ်မ (၈၈) ကို ထုထောင်းနေတဲ့ အချိန်ကာလလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကျိုင်းတုံမှာ ဦးနေ၀င်းကို ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးဟောင်း သန်းရွှေက အဖားတော်ပြီး လိုလေသေးမရှိ ပြုစုခဲ့တာမို့ မှတ်ဥာဏ်ကောင်းတဲ့ ဦးနေ၀င်းက နောင်တခေတ်ရဲ့ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်အဖြစ် လျာထားခဲ့ဟန်တူပါတယ်။ အဲဒီနောက် ဦးသန်းရွှေဟာ နတခတိုင်းမှူး ဧရာဝတီတိုင်း ပုသိမ်သို့ ရာထူး တိုးသွားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက် ဒုတိယ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် (ကြည်း) လစ်လပ်နေချိန်မှာ နတခ တိုင်းမှူး ဖြစ်နေတဲ့ ဗိုလ်မှူးချုပ် သန်းရွှေအား ဦးနေ၀င်းက ရာထူးနှစ်ဆင့် ခုန်ပြီး ပေးခဲ့ပါတယ်။ ကျိုင်းတုံမှာကတည်းက သတိကို မတ်နေအောင် ဆွဲပြီး ကြောက်ဒူးတုန်ပြနေတဲ့ ဦးသန်းရွှေအား ဦးနေ၀င်းက "ဒီကောင်လေးတော့ ခေါက်ရိုးကျိုးတဲ့ တုံးတုံးအအ တပည့်လေး" လို့ မှတ်ချက်ချသွားဟန် တူပါတယ်။ အမှန်တကယ်တော့ ဒုချုပ် ဖြစ်ဖို့ဟာ စစ်ရေးချုပ်၊ ကစထမှူး၊ ရန်ကုန်တိုင်း တိုင်းမှူး ရာထူးရှိသူများကသာ အစဉ်အလာ ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ ဦးသန်းရွှေ အလှည့်ကျတော့ အသက်ငယ်ရွယ်သူမို့ (ထိုစဉ်က တိုင်းမှူး ဖြစ်စဉ် ၅၄ နှစ်သာ ရှိ) ဦးနေ၀င်းက သူ့အား ဦးစီးချုပ် အဖြစ် တာဝန်ကြာကြာ တာဝန်ပေးလို့ ရနိုင်ကြောင်း အကြောင်းပြပြီး ဆိုပြန်တယ်။ ဒုချုပ်ရာထူးဟာ ဦးစီးချုပ်ရာထူးအတွက် ရှေ့ပြေး နေရာကောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးဟောင်း စောမောင် အာဏာသိမ်းစဉ်က ဦးနေ၀င်းဟာ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွှန့်နဲ့ တွဲထည့်ပြီး တာဝန်ပေးခဲ့ပေမဲ့ ဦးသန်းရွှေကိုတော့ ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ မပေးဘဲ န၀တ အဖွဲ့ဝင် တစ်ဦး အနေဖြင့်သာ တာဝန်ပေးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲဒါကို ဦးသန်းရွှေ စိတ်ထဲမှာ အညှိတေး ဦးနေ၀င်းအပေါ် စတင် မှတ်ထားခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဦးသန်းရွှေ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ ဦးနေ၀င်း မိသားစု မျက်စိဆံပင်မွှေးစူးတဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေ ဆက်တိုက် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ရှေးဦးစွာ ဒေါ်ခင်စန္ဒာဝင်း စီးနင်းလိုက်ပါတဲ့ကားနဲ့ ရဲချုပ် စံသိန်း သမီး စီးနင်းတဲ့ကား တိုက်မိလို့ ဦးနေ၀င်းက ဗိုလ်ချုပ် ခင်ညွှန့်အား ဖုံးဆက်ပြီး ခင်ညွှန့် ငါ မသေသေးဘူးကွ လို့ ဖိအားပေး ခြိမ်းခြောက်ခဲ့တဲ့ ဖြစ်စဉ် ရှိပါတယ်။ ရဲချုပ် စံသိန်းလည်း စပိန်သံအမတ်ကြီးအဖြစ် လွှင့်သွားခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဖြစ်စဉ်တခုက ဒေါ်ခင်စန္ဒာဝင်းနဲ့ ကြေးနန်းနဲ့ ဆက်သွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန ပူးတွဲ ဆောင်ရွက်တဲ့ ဆယ်လူလာဖုံး ကျပ် (၅) သိန်းတန် ကိစ္စတွေမှာ ပြဿနာ တက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ထိုးကျွေးခံရသူကတော့ ထိုစဉ်က ပြုတ်သွားတဲ့ အဲဒီဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးချုပ်ဟောင်း ၀င်းတင် ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးနေ၀င်းရဲ့ မြေးများဖြစ်တဲ့ ဇွဲနေ၀င်း၊ ကျော်နေ၀င်းတို့ဟာ နိုက်ကလပ်တွေမှာ ဖြစ်ဖြစ်၊ ကားမောင်းနေရင်းဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ဗိုလ်ကျနေတာကြောင့် လေးလပတ် အစည်းအဝေးတွေမှာ ဦးသန်းရွှေ တစ်ယောက် မကျေမနပ် ပြောခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဦးမောင်အေးရဲ့ သမီးကို ဦးနေ၀င်းမြေးများက မထင်မဲ့မြင် လုပ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ အဲဒါကို ဦးသန်းရွှေရဲ့ ဇနီး ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင်နဲ့ ဦးမောင်အေးရဲ့ ဇနီး ဒေါ်မြမြစန်းတို့က မကျေမနပ် ပြောဆိုမှုကြောင့် လင်တော်မောင်တွေထံ ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။
အဆိုးဆုံးကတော့ ဦးနေ၀င်းရဲ့ ကိုယ်ရံတော် တပ်ရင်းဖြစ်တဲ့ သနက (၄) တပ်ရင်း (ယခု ခမရ ၃၀၄ ဖျက်သိမ်းပြီး) ကို ခါးပိုက်ဆောင်တပ်အနေနဲ့ ထားကာ ယူနီဖောင်းများ ချုပ်ပေးခြင်း၊ ငပလီမှာ အပန်းဖြေခိုင်းခြင်း၊ လေ့ကျင့် ဆောင်ရွက်နေခြင်း၊ တပ်ရင်းမှူးအား ရန်ကုန်တိုင်း တိုင်းမှူး လေးလပတ် အစည်းအဝေးတွေမှာ တက်ရောက်ခွင့် မပေးဘဲ နေခိုင်းခြင်း စတာတွေ ဆက်တိုက် လုပ်လာပါတယ်။ ဦးနေ၀င်း မြေးတွေဟာ ဆီဒိုးနာဟိုတယ်မှာ ဦးနေ၀င်း မွေးနေ့ ကျင်းပပြီး တခမ်းတနား လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဦးနေ၀င်း မွေးနေ့ပွဲကို တက်ရောက်မိခဲ့တဲ့ ရန်ကုန်တိုင်း တိုင်းမှူးဟောင်း ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မျိုးညွှန့်အပေါ် ဦးသန်းရွှေ အမျက်တော်ရှခဲ့ပါတယ်။ ဦးနေ၀င်း မြေးတွေဟာ ဘိုးတော် တစ်ယောက်အား ကိုးကွယ်ပြီး ရုပ်ထုများ (ဦးသန်းရွှေ/ ဦးမောင်အေး) ကို အောက်လမ်းနည်းသုံး ဂျင်းတို့ စီရင်မှုကြောင့် ဦးသန်းရွှေ လေဖြတ်ကာ ဦးမောင်အေး ၀မ်းဗိုက်နာကာ စင်ကာပူ ဆေးရုံသို့ အရေးပေါ် သွားရောက်ကုသလိုက်ရပါတယ်။ ထို့ထက် ပိုလွန်ကဲလာတာက တပ်မ (၇၇) တပ်မမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် သန်းဌေး (ယခု စွမ်းအင် ၀န်ကြီး) အား တော်လှန်ရေးနေ့ လုံခြုံရေး ရယူနေတာမို့ ဦးနေ၀င်း မြေးများက စည်းရုံးသိမ်းသွင်းခဲ့ပါတယ်။
အာဏာပြန်သိမ်းတဲ့အစီအစဉ်ကို ရိပ်မိသွားတဲ့ ဦးသန်းရွှေဟာ ကျူပင်ခုတ် ကျူငုတ်မကျန် ဦးနေ၀င်း မိသားစု တစ်ခုလုံးအား ပြင်းပြင်းထန်ထန် နှိပ်ကွပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဦးသန်းရွှေဟာ အညှိးတရား ကြီးမားစွာနဲ့ ဦးနေ၀င်း အသုဘ အခမ်းအနားကို အောက်ပါ အတိုင်း အမိန့် ချခဲ့တယ်လို့ တပ်မတော် အရာရှိကြီး တစ်ဦးက စည်းလုံးခြင်းရဲ့အင်အား ၀က်ဘ်ဆိုဒ်သို့ ပြောခဲ့ပါတယ်
"ဦးသန်းရွှေက ဦးနေ၀င်း အသုဘအခမ်းအနားကို ရုံးစားပွဲကို လက်သီးနဲ့ ထုပြီး ပြောတယ်ဗျ၊ ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကို အလောင်းကို မြေချခွင့်မပေးဘဲ မီးသဂြိုလ်ပြီး ရတဲ့ ပြာမှုန့်ကို ရေမျောလိုက်" လို့ ပြောတယ်ဗျာ။ ဆက်လက်ပြီး တပ်မတော် အရာရှိကြီးက အဲဒီ အစီအမံကတော့ အဘိုးကြီး တစ်ယောက်ရဲ့ တစ်ယောက်တည်း စိတ်ကူးမဟုတ်ဘဲ ဘိုးတော်ရူး ရူးနေတဲ့ ဦးသန်းရွှေသား အစီအမံလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ အဲဒီ သတင်းလည်း ကြားရော အရင် မဆလ ၀န်ကြီးဟောင်းများက ကန့်ကွက်ခဲ့ပေမဲ့ ဗိုလ်ချုပ် ခင်ညွှန့်ခမျာ ဘယ်လိုမှ မပြောရဲဘဲ လက်ရှောင်နေရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲဒီသတင်းကို ပြည်သူလူထုက တအံ့တသြ ဖြစ်ခဲ့ရပြီး လူထုများရဲ့ တီးတိုးဝေဖန်သံများ ပေါ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ တချို့က ကိုယ့်ရဲ့ ကျေးဇူးရှင်ကို လုပ်ရက်လေခြင်း ပြောကြသလို တချို့ကတော့ ၀ဋ်ဆိုတာ ဒီဘ၀မှာဘဲ တန်ပြန် သက်ရောက်မှု ရှိတတ်တယ်ဆိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ယခုဆိုရင် ဒေါ်ခင်စန္ဒာဝင်းနဲ့ ဇွဲနေ၀င်းတို့ လွတ်လပ်ပြီမို့ ဦးသန်းရွှေအပေါ် ဘယ်လို သဘောထားနဲ့ တုန့်ပြန်သွားမည် ဆိုတာကိုတော့ စောင့်ကြည့်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ်လိုက်ရပါတယ်။
အိုး​ဝေမဂ္ဂဇင်း​ကို ဆက်မထုတ်ရန် စာ​ပေစိစစ်​ရေး​က သတိ​ပေး
12:14 PM ko pae Lay No comments
အား ye zaw ko ရေးသားပါသည် ဧပြီ 18, 2012 at 10:52pm
အိုးဝေမဂ္ဂဇင်းကို ဆက်မထုတ်ရန် စာပေစိစစ်ရေးက သတိပေး
ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ပြန်လည်ပေါ်ပေါက်ရေးနဲ့ ကျောင်းသားအခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူတွေက ထုတ်ဝေနေတဲ့ အိုးဝေမဂ္ဂဇင်းကို ဥပဒေနဲ့မညီတဲ့အကြောင်း စာပေစိစစ်ရေးက ခေါ်ယူသတိပေးခဲ့တယ်လို့ မဂ္ဂဇင်းတာဝန်ခံတွေက ပြောပါတယ်။
အိုးဝေမဂ္ဂဇင်း အတွဲ ၁ အမှတ် ၉ ကို မကြာခင်က ထုတ်ဝေလိုက်ပြီးနောက် စာပေစိစစ်ရေး ဒု – ညွန်ချုပ် ဦးတင့်ဆွေက မဂ္ဂဇင်းတာဝန်ခံတွေဖြစ်တဲ့ ဗကသများအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုစည်းရုံးရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ကိုကျော်ကိုကိုနဲ့ အိုးဝေမဂ္ဂဇင်း တာဝန်ခံ အယ်ဒီတာ ကိုရှိန်းရာဇာထွန်းတို့ကို ဒီနေ့မနက်မှာ ခေါ်ယူတွေ့ဆုံ သတိပေးခဲ့တာပါ။
“၁၉၆၂ ခုနှစ် ပုံနှိပ်အက်ဥပဒေက ခုချိန်မှာ မဖျက်သိမ်းရသေးဘူး၊ နောက်တခါ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ လျော်ညီတဲ့ ဥပဒေအသစ်ကလည်း မီဒီယာဥပဒေ၊ ပုံနှိပ်ဥပဒေကလည်း ပြဋ္ဌာန်းဖို့အတွက် ပြင်ဆင်တုန်းပဲ ရှိသေးတယ်။ ဒီလိုအကူးအပြောင်းကာလမှာ ဥပဒေဟောင်းက အကျုံးဝင်သေးတဲ့ အတွက်ကြောင့် အခုလို ခွင့်ပြုချက်မယူဘဲ အိုးဝေမဂ္ဂဇင်းကို ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ ဥပဒေနဲ့ ငြိစွန်းနေပါတယ်။ ဒါကိုသိစေချင်လို့ ပြောပြတာပါ။ ခေါ်ယူခြိမ်းခြောက်ခြင်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဆွေးနွေးတာပါတဲ့၊ ဒု – ညွန်ချုပ် ဦးတင့်ဆွေပေါ့။”
နောက်ဆုံးထုတ်ထားတဲ့ အိုးဝေမဂ္ဂဇင်းအတွဲ (၁) အမှတ် ၉ ကို အွန်လိုင်းကနေ အဓိက ဖြန့်ဝေတာဖြစ်ပြီး မကြာခင်က ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်း ဗကသအဖွဲ့ခွဲတွေနဲ့ အဖွဲ့ဝင်တွေကြားမှာ ပြန်လည်ကူးယူ လက်ဆင့်ကမ်း ဖြန့်ဝေတာလို့ ကိုကျော်ကိုကိုက ရှင်းပြပါတယ်။
လောလောဆယ် အတွဲ ၁ အမှတ် ၁၀ အတွက် စာမူတွေ စုဆောင်းနေဆဲ အချိန်မှာ စာပေစိစစ်ရေးက ခေါ်ယူသတိပေးလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
“အခုလို ခေါ်ပြောတဲ့ကိစ္စက အနုနည်းနဲ့ ပျော့ပြောင်းညင်သာတဲ့နည်းနဲ့ သတိပေးတာလို့ ကျနော်မြင်တယ်။ အသိပေးတယ်လို့တော့ သူတို့ သုံးစွဲပြောဆိုတယ်။ နောင်အခါမှာ ဒီလိုစာအုပ်မျိုး ထုတ်မယ်ဆိုရင် စိစစ်ရေးကို တရားဝင် လေ်ွာက်လွှာ တင်ပြီးတော့ စိစစ်ရေးကတ်ရအောင် ကြိုးစားခိုင်းပါတယ်။ ကျနော်တို့ ပြန်မေးထားတယ်။ လျှောက်လွှာတင်ပေမယ့် ပြန်ချမပေးတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေရှိတယ်။ ဒီတော့ ဒါက သိပ်သေချာတာတော့ မဟုတ်ဘူး။ ကျနော်တို့က မြန်မာပြည်မှာ ဆင်ဆာအဖွဲ့ကို လုံးဝဖျက်သိမ်းပစ်လိုက်ဖို့ မျော်လင့်တယ်။ တဘက်က ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးကလည်း ဒါကိုပဲပြောနေကြတယ်။ အဲဒီတော့ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကို ရောက်သွားပြီဆိုရင် အခုလို နိုင်ငံရေးတွေ၊ ဘာသာရေးတွေကို လိုက်ကန့်သတ်ပြီးတော့ စိစစ်နေတဲ့ အနေအထားမျိုး မရှိတော့ဘူးဆိုရင် လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဝေခွင့်အတိုင်း ဆက်သွားမှာဖြစ်တယ်။ အဲဒါမျိုး စဉ်းစားထားတယ်။ လတ်တလောအနေအထားမှာ ပြန်ပြီးတော့ စဉ်းစားရဦးမယ်။ အားလုံးကို ပြန်ချပြတဲ့အခါမှာ ဘယ်လို ဆက်ပြီး ဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုတာတော့ အခုတော့ မပြောနိုင်သေးဘူး။ ဒါပေမယ့် သေချာတာက ကျနော်တို့က ဆင်ဆာကိုပြပြီးတော့ ထုတ်ဝေမှာတော့ မဟုတ်ဘူး။”
မြန်မာပြည် လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းတဲ့ ကာလတုန်းက ကျောင်းသားထုအကြားမှာ ဩဇာကြီးခဲ့တဲ့ အိုးဝေမဂ္ဂဇင်းရဲ့ သမိုင်းအမွေကို ဆက်ခံဖို့ ထုတ်ဝေတာလို့ နောက်ဆုံးထုတ် အယ်ဒီတာအာဘော်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
အိုးဝေ အတွဲ ၁၊ အမှတ် ၉ မှာ ဗကသ ဥက္ကဋ္ဌဟောင်း ကိုမင်းကိုနိ်ုင်ရဲ့ ကဗျာတပုဒ်၊ ဗကသရဲ့သမိုင်း၊ လက်ရှိ ဗကသကို ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အခြေအနေ၊ ဗကသရဲ့ မူဝါဒတွေကို အဓိက ဖော်ပြထားပါတယ်။
TIME မဂ္ဂဇင်းက ထုတ်ပြန်လိုက်သည့် ကမ္ဘာပေါ်ဝယ် လွှမ်းမိုးမှုအရှိဆုံး ပုဂ္ဂိုလ် ၁၀၀ စာရင်း
12:09 PM ko pae Lay No comments
၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွင်း ကမ္ဘာပေါ်ဝယ် လွှမ်းမိုးမှုအရှိဆုံး ပုဂ္ဂိုလ် ၁၀၀ စာရင်းကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှ အပတ်စဉ်ထုတ် TIME မဂ္ဂဇင်းက ယနေ့ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ယင်းစာရင်းဝယ် မြန်မာနိုင်ငံက သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် တစ်ဦးတည်းသာပါဝင်ပြီး အမှတ်စဉ် ၆၇ နေရာတွင်ပါရှိသည်။
သူ့အောက်မှာ အီရန်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင် အယာသွလ်လာ အလီ ခါမေနီက အဆင့် ၆၈ နဲ့ ရှိနေပါတယ် ။
အမေရိကန် သမ္မတ အိုဘားမားက အမှတ်စဉ် ၆၁ နေရာတွင်ပါရှိကာ၊ ဟီလာရီကလင်တန်က အမှတ်စဉ် ၈၈ နေရာတွင်ပါရှိသည်။
ဘောလုံးသမားတွေထဲမှာတော့ လီယွန်နယ်မက်ဆီ တစ်ယောက်ထဲသာပါပြီး အဆင့် ၈၆ မှာ ရှိပါတယ် ။ လက်ရှိ မြောက်ကိုရီးယား
ခေါင်းဆောင်သစ် ကင်ဂျုံအွန်းကတော့ အဆင့် ၉၇ ၊ တာလီဘန်ခေါင်းဆောင် မူလာမုဟမ္မဒ် အိုမာ က အဆင့် ၉၈ နဲ့
ဆီးရီးယားခေါင်းဆောင် ဘာရှားအယ် အာဆတ်ကတော့ အဆင့် ၁၀၀ မှာ ရှိပါတယ် ။ စာရင်း အပြည့်အစုံမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
ဦးဦး မှော်ဆရာ ဒီစာရင်းတွေကြည့်ရင်းနဲ့ အဆင့် ၃၆ က Anonymous ဆိုတာကိုတွေ့တော့
စိတ်ဝင်စားလို့ ၀င်ရှာကြည့်တာ အောက်ပါအတိုင်းတွေ့ရပါတယ် ။
United, if at all, byataste for shock humor and disdain for authority, this leaderless Internet hive brain is plundering and
playing in the electronic networks of an ever shifting enemies list: Arab dictatorships, the Vatican, banking and entertainment firms,
the FBI and CIA, the security firm Stratfor and even San Francisco's BART transport system. Did Anonymous fix the TIME 100 poll?
"Depends who you think is smarter,aglobal collective of highly skilled hackers or the TIME IT department," says one fellow traveler,
anonymously. Anonymous earned its place on the list, one way or the other.
Gellman isacontributing editor-at-large for TIME and the author of Angler: The Cheney Vice Presidency
12:02 PM ko pae Lay No comments
Posted by အောက်တိုဘာလေး on April 19, 2012 at 8:14am
by Health Articles on Monday, April 16, 2012 at 3:31am ·
-ရုံးပတီသီးမှာ ပါဝင်တဲ့ အမျှင်တွေက သွေးထဲက သကြားဓာတ်ကို လျော့ကျစေပါတယ်။ သူက အူကနေ သကြားဓာတ် စုတ်ယူမှုကို ထိန်းထားပေးနိုင်တာမို့ပါ။
-ရုံးပတီသီးမှာ ပါဝင်တဲ့ အချွဲတွေက ကိုလက်စထရောကိုတင် တားဆီးပေးတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အဆိပ်တွေ သယ်ဆောင်လာတဲ့ အက်စစ်တစ်မျိုးကိုလည်း အသည်းကနေ အမြောက်အများ စစ်ထုတ်နိုင်ဖို့ လည်းအားပေးပါတယ်။
တော်တော်များများသော ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ပညာရှင်တွေက ရောဂါတော်တော်များများဟာ အူကနေ စဖြစ်တယ်လို့ ယုံကြည်ထားကြပါတယ်။ ရုံးပတီသီးရဲ့ အမျှင်ဓာတ်က ဝမ်းချုပ်တာကို တားဆီးပေးတယ်။ အမျှင်အများစုက ဝမ်းချုပ်တာကို တားဆီးပေးတတ်ပေမယ့် ရုံးပတီသီးမှာပါဝင်တဲ့ အမျှင်ဓာတ်ကတော့ အဲဒီအတွက် အကောင်းဆုံးလို့ ဆိုပါတယ်။ အူကို အလုပ်လုပ်တာ ပုံမမှန်စေတဲ့၊ ထိခိုက်စေတတ်တဲ့ ကြမ်းတမ်းတဲ့ ဂျုံကြမ်းတွေလို မဟုတ်ပဲ ရုံးပတီသီးရဲ့ အမျှင်ဓာတ်က အူကို သက်သာမှု ပေးစေနိုင်ပါတယ်။
ရုံးပတီသီးမှာ ပါဝင်တဲ့ ဓာတ်တွေနဲ့ အာဟာရ တန်ဖိုးတွေ လျော့ကျမသွားဖို့အတွက်က သူ့ကို တတ်နိုင်သမျှ အချိန်အနည်းဆုံးချက်ပြုရပါမယ်။ အစိမ်းစားတဲ့သူတွေရှိပေမယ့် ရေနွေးလေး ဖျောလိုက်တာ၊ ခဏလောက် ရေနွေးငွေ့နဲ့ ပေါင်းလိုက်တာမျိုးတွေ လုပ်စားနိုင်ပါတယ်။
မူရင်းပို့စ် on http://www.kyaukme.com/2012/01/blog-post_28.html
ေ ပျာ် စရာ လေးပေါ့.....
12:00 PM ko pae Lay No comments
to 442, me, မအိအိဖြူ.....
ကွန်ပျုတာသုံးနေရင်း ပုံတွေရိုက်ယူချင်ရင် လွယ်ကူသော...
စက်ပေါ်မှာဒေါင်းထားသမျှတွေအားလုံး zip နဲ့ ချုပ်ထားလ...
လှိုင်သာယာတွင် ရေကန်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရင်း သေနပ်ကျည်ဆ...
မြန်မာပြည်မှာ စစ်သားနဲ့ ဘုန်းကြီး အရေအတွက် လျှော့ဖ...
"မြန်မာ့လက်ရွေးစင် ဘော်လီဘော အားကစား သမား တစ်ဦး ၏...
ဦးသန်းရွှေက ဦးနေ၀င်းကို ဘာကြောင့် အညှိးကြီးခဲ့တာလ...
အိုး​ဝေမဂ္ဂဇင်း​ကို ဆက်မထုတ်ရန် စာ​ပေစိစစ်​ရေး​က သတ...
TIME မဂ္ဂဇင်းက ထုတ်ပြန်လိုက်သည့် ကမ္ဘာပေါ်ဝယ် လွှမ်းမိ...
အစားအသောက်များမှ မမြင်နိုင်သော လူသတ်ကောင်များ
ဒီပဲယင်းနဲ့ ပတ်သက်၍ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့်က ဗိုလ်ခ...
စိုင်းစိုင်းနဲ့ သက်မွန် အာဒံ အေဝ တစ်ကယ်ဖြစ်ပြီလားန...
NLD ကိုယ်စားလှယ်များ လွှတ်တော် တက်ရေး မနက်ဖြန် ဆုံး...
သံလျှင်NLD လူငယ်ရေကစားမဏ္ဍပ်ကို လူ၁၅ဦးထက်မနည်း ၀င်ေ...
သားအိမ်အတွင်း၌ လူ၏ သန္ဓေသားလောင်း ကြီးထွားလာပုံ အဆင...
ရွှေဝါရောင်မြန်မာသင်္ကြန်မှအမဲရောင် Sexy သင်္ကြန်ဖြစ်သွ...
ကိုပီတာရဲ့အတွေးပုံရိပ်များ April 19 2012
အင်ဒိုနီးရှားအိမ်ဖော် (Win Farida, 26- years old)အ...
အမေရိကန်၊ နော်ဝေနှင့် သြစတြေးလျတို့ မြန်မာနိုင်ငံအ...
၁၂ နှစ်ကြာကာလအတွင်း ပထမဆုံးအဖြစ် ဂျပန်လေကြောင်းလို...